Murwiri weKodzero VaItai Dzamara Vanosvitsa Makore Matatu Vapambwa
Kurume 09, 2018
Amai Sheffra Dzamara, kurudyi, nevamwe varangarira VaItai Dzamara muAfrica Unity Square
Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika nhasi vaungana paAfrica Unity Square vachirangarira mutungamiri weOccupy Africa Unity Square, VaItai Dzmara, avo vakapambwa vakatsakatika nevanofungidzirwa kuti vasori makore matatu apfuura.
Vanhu vanga vachidarika zana vaungana paAfrica Unity Square muHarare nhasi vachicherechedza kusvika kwaita makore matatu nhasi VaDzamara vapambwa nevari kufungidzirwa kuti vasori.
VaDzamara vanonzi vakapambwa musi wa9 Kurume makore matatu apfuura vari pakati pekugerwa mumusha weGlen View, uye kusvika pari zvino hapana anoziva kuti chii chakaitika kwavari.
Mudzimai waVaDzamara, Amai Sheffra Dzamara, vaudza Studio 7 pachiitiko ichi kuti vabaiwa nendangariro dzekufunga murume wavo.
Mumwe ataura pachiitiko ichi mutungamiri webato reUDM, Amai Violet Mariyacha, vati semunhukadzi vanoshaya zvekuita kana vakafunga hupenyu huri kurarama Amai Dzamara vasingazive kune murume wavo.
Zvichakadai, mutungamiri weAmnesty International muZimbabwe, VaCousin Zilala, vati hurumende inofanira kutora matanho kuti pazivikanwe kuti chii chakaitika kuna VaDzamara uye kuti vasanganiswe nemhuri yavo kana vari vapenyu.
VaZilala vatiwo kupambwa kwakaitwa VaDzamara kunoratidza kuti veruzhinji havasati vasununguka kutaura zvavanoda vachiti izvi ndezvimwe zvezvinoratidza kuti sarudzo dziri pachena dzinova zvezvimwe zvaidiwa naVaDzamara dzichanetsa kuita gore rino.
Vachitaurawo pachiitiko ichi, munin’ina waVaDzamara, VaPatson Dzamara, vakurudzira veruzhinji kuti vasavhotere Zanu PF musarudzo dzegore rino vachiti veruzhinji havafanire kuvhotera vanhu vanopamba vanhu.
Zvichakadai, masangano anoshanda akazvimirira akaita seHeal Zimbabwe Trust neCrisis in Zimbabwe Coalition, aburitsa mashoko ekuti hurumende inofanira kutaura kuti VaDzamara varipi.
Izvi zvinotevera mutongo wakaturwa nedare repamusoro wekuti hurumende inofanira kuferefeta zvizere nyaya yekushayikwa kwaVaDzamara.